Tareenka Korantada - Jiangsu Runau Soo saarista Elektaroonigga Co., Ltd.
Aaladda Awooda Sare iyo Thyristor ee Tareenka Korontada
Tareen koronto ku shaqeeya: oo ah tareen koronto oo hal waji ah-DC, waa tareenka korantada AC ee aadka loo isticmaalo. Tareenka korantada hagaajiya, AC-ka hal-wajiga sare ee danab sare ee shabakadda xiriirka waxaa hoos u dhigaya turjubaanka qaboojiyaha marka hore, ka dibna hal-waji AC ayaa loo beddelaa DC aaladda hagaajinta oo ka kooban walxaha hagaajiyeyaasha silicon ama thyristor , oo la keenay matoorka jarista. Ku samee xakamaynta wajiga hagaajiyaha si aad u beddesho danab sax ah si aad ula qabsato xawaaraha tareenka.
Tareen koronto koronto ku shaqeeya oo hal waji ah: oo sidoo kale loo yaqaanno tareenka korantada ee tooska ah ee loo yaqaan 'AC AC', hal-waji matoor mashiinka jarista ayaa la adeegsadaa. Awoodda korantada sare ee AC ee shabakadda xiriirka ayaa hoos u dhigi doonta danablaha tarjumaha, ka dibna si toos ah loogu siiyaa matoorka jarista.
Tareenka korantada AC-DC-AC: sidoo kale loo yaqaan hal-waji-saddex waji tareen koronto. Awoodda korantada sare ee AC ee shabakadda xiriirka ayaa marka hore hoos loo dhigaa oo lagu hagaajiyaa qalabka wax lagu kala jaro, sida lagu ilaaliyo danab DC ama DC ee isku xirka DC-ga dhexdhexaad ah waa xasilloon yahay. Kadibna, wareegga wareegga ayaa u beddelaya awoodda DC-ga ah mid seddex waji ah oo AC ah wuxuuna siiyaa mashiinka kala-goynta sedexda waji ama mashiinka seddex-waji ee isku midka ah. Awoodda wax soo saarka iyo xawaaraha tareenka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo la jaangooyo inta jeer iyo danab ee seddex-waji oo is-weydaarsan kara aaladda qalabka wax-beddelaha.
Qalabka cilad bixiyaha ee marinka jarista: u beddelaa tamarta korantada ee laga soo qaado khadka gudbinta korontada ee loo beddelo inta jeer ee korantada, soo noqnoqoshada hal-waji iyo soo noqnoqodka awoodda saddex-waji ee awoodda AC, loona qaybiyo shabakadda xiriir ee u dhiganta.
Alaabta caadiga ahs: